Xilli firaaqo, dhaqan iyo nolosha jaaliyadaha | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Dheeraad ku saabsan Iswiidhan / Xilli firaaqo, dhaqan iyo nolosha jaaliyadaha
Dib u cusboonaysiinti ugu dambeysay: 26 4 2019
Xilli firaaqo waxaa lagu magacaabaa wakhtiga aad fasaxa ka tahay shaqo, iskool iyo hawsha guriga. Adiga laf ahaantaada ayaa dooranaya waxa aad doonaysid inaad samayso wakhtiga xilli firaaqahaaga.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan xilli firaaqaha iyo hawlaha loogu talogalay adigaaga ah magan-gelyo doonka.
Halkan waxaa ku jirta warbixin ku saabsan xilli firaaqaha iyo hawlaha loogu talogalay adigaaga dhawaan helay sharciga deganaansho.
Halkan waxaa ku jirta warbixinta ku saabsan xilli firaaqaha iyo hawlaha loogu talogalay adigaaga yimi Iswiidhan adigoo bilaa waalid ah.
Xiisooyinka xilli firaaqaha ee caadiga ka ah Iswiidhan waa tusaale ahaan noocyada kala duwan ee isboortiga, daansiga iyo masraxa, in la ciyaaro muusig, ciyaaraha tiifiiga iyo kombiyuutarka iyo akhriska buugta. Jaaliyado iyo degmooyin badan waxay leeyihiin noocyo kala duwan iyo hawlo xilli firaaqo oo aad ka qayb qaadankarto. Dhowr tusaale oo ka mid ah noocyada jaaliyadaha kala duwan waa jaaliyadaha isboortiga iyo dhaqanka, ururada waxbarasho iyo ururada caqiidada la aaminsanyahay.
Dhamaan dadku waxay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan nolol dhaqan. Waxaa jira qaabab kala duwan oo dhaqan. Waxa wada-jir u ah dhaqan oo dhan waa inuu kaalmeeyo shakhsiga horumarkiisa. Tani micnaheedu waa in dhaqanku uu dadka horumariyo. Iswiidhan waxay sida dalal badan leedahay dhaqan badan oo la bixin karo dhanka qaabka tusaale ahaan deegaanka, taariikhda iyo cuntada.
Tusaale dhanka hawlaha xilli firaaqaha iyo nolosha jaaliyadaha.
Iswiidhan waxay leedahay deegaan dabiici ah oo aad u qurux badan lehna noocyo deegaan oo kala duwan. Waxaa jira jardiinooyin qaran oo badan oo aad booqan karto. Gudaha Iswiidhan waxaa ka jirta xuquuqda tamashlaynta oo tani micnaheedu waa in dhamaan dadku ay xaq u leeyihiin inay si xor ah ugu socdaan deegaanka dabiiciga ah. Adigu waxaad tusaale ahaan waad ku dhex socon kartaa kana guran kartaa miraha. Isla markaa waa waajibkaaga inaad ixtiraamto deegaanka dabiiciga ah iyo nolosha xayawaanka marka aad joogto deegaanka dabiiciga ah.
Akhri dheeraad ku saabsan xaqa tamashlaynta kuna qoran buuga yar ee laga helo Hey'ada dawladeed ee deegaanka
Dhamaan dalka oo dhan waxaa laga helaa maktabado magaalo. Halkan waxaad ka amaahan kartaa filimo iyo buug iyadoo bilaa kharash ah. Maktabadaha qaarkood waxay qaataan lacag yar haddii aad doonaysid inaad tusaale ahaan amaahato Dvd. Si aad wax uga amaahan karto maktabad waxaad u baahantahay kaarka amaahda. Kani waxaad heli kartaa haddii halka qaabilaada tusto kaarkaaga aqoonsiga.
Waxaa kale oo aad dooran kartaa inaad fariisato maktabada si aad u akhrisato buug ama joornaal. Maktabadaha badankoodu waxaa xitaa laga helaa kombiyuutaro iyo intarnat. Haddii aad doonaysid inaad daabacato waraaq ama koobiyaysato waa inaad lacag bixisaa calaa bog.
Mararka qaarkood waxaa maktabadu bixisaa hawlo ah qaabka maqaaxida luqada, muxaadarooyin iyo qoraa soo booqda.
Waxaa jira shinamooyin badan oo ku yaala Iswiidhan oo dhan. Waa la ballansan karaa tigidh dhanka intarnatka iyadoo la sii marayo bogga intarnatka ee shineemada ama waxaad tegi kartaa shineemada kana iibsan kartaa tigidh. Waxaa badanaaba jira shinamooyin yar kuwaas oo laga daawado filimada ajnabiga ah. Haddii aad leedahay qalabka DVD waxaad filim ka kireysan kartaa dukaamada fiidyowyada ee gaarka ah. Waxaad tusaysaa aqoonsigaaga oo bixinaysaa lacag si aad filimkan ugu qaadato guriga hal ama dhowr maalmood. Haddii aanad filimkan ku soo celin wakhtigi loogu talogalay waa inaad bixisaa lacag khidmad oo ah ganaax.
Haddii aad xiisaynayso inaad samayso dhaq-dhaqaaq ama jimicsi waxaa jira fursado badan. Waxaad tusaale ahaan tegi kartaa jardiinooyinka dadweynaha ka dhaxeeya, hoolalka dabaasha iyo hoolalka ciyaaraha barafka. Waxaa kale oo jira hoolal isboorti kuwaas oo adigu aad tusaale ahaan ku ciyaari karto teenista ama ku samayn karto hawlo kale.
Haddii aad doonayso inaad ku tababarato xarun tababar waa inaad bixisaa lacag khidmad ah. Badanaaba waxaad bixinaysaa bil ahaan. Waxaa kale oo aad iibsan kartaa kaarka hal mar ah haddii aad doonaysid inaad tijaabiso nooc hawl ah. Xarumaha tababarka badankoodu waxay bixiyaan tababarka jir ahaan (jiimka) iyo tababarka koox ahaaneed. Tababarka koox ahaaneed wuxuu noqon karaa tusaale ahaan jimicsi, daansiga ama yooga.
Waxaa jira madxafyo iyo hoolal farshaxan labadaba kuwaas oo soo bandhiga farshaxan leh qaabab kala duwan. Waxay ahaan karaan wax kasta laga bilaabo sawiro, sanabyo ama nashqadaynta kombiyuutar. Mararka qaarkood waa inaad bixisaa lacagta kharashka soo gelida laakiin mararka qarkoodna waa bilaash.
Iswiidhan waxay leedahay nolol muusig oo qani ah lehna tusaale ahaan bandhigyo, heeso kooxeed iyo tiyaatarka muusiga. Baararka qaarkood waxay bixiyaan muusig toos loo ciyaarayo qaar ka mid ah habeenada. Waxaad xitaa ku heesi kartaa kuna ciyaari kartaa muusig dariiqa. Si muusig loogu ciyaaro meelaha dadweynaha ka dhaxeeya waxaa jira qawaaniin gaar ah. Qawaaniintan way ku kala duwanaan karaan degmooyinka kala duwan.
Waxaa jira kaniisado badan iyo dhismayaan diini ah oo kale kuwaas oo ka furan dalka oo dhan. Gudaha kaniisada waxaad ku daari kartaa iftiin kuna heli kartaa wakhti degan oo lagu fikiro. Magaalooyinka qaarkood waxaa laga helaa xitaa masjidyo iyo goobaha diiniga ee Yuhuuda.
Taariikhda Iswiidhan waxaa laga helaa qaar badan oo ka mid ah madxafyada dalka. Kuwa badan oo ka mid ah madxafyadan waxay qaataan kharashka soo gelida.
Waxaa kale oo jira goobo taariikhi ah kuwaas oo ah raadkii dadki waagi hore.
Iswiidhan waxaa ka socda cilmi-baarista dhanka dhinacyo kala duwan. Dhamaan dadku waxay xaq u leeyihiin inay ogaadaan horumarka cilmiga. Hawsha cilmiga waxaa ilaalisa xuquuqda uu curiyuhu u leeyahay waxa uu soo saaray.
Cunto iyo cabitaan
Waxaa jira goobo cunto iyo maqaaxiyo badan oo la kala dooran karo. Waa caadi in la qaato "fika" taas oo micnaheedu tahay in aad la kulanto asxaabta ama dadka aad wada shaqaysaan loola sheekaysto, loola kulmo, la cabo shaah ama bun iyo laga yaabee in la cuno keeg ama keega yar yar.
Waxaa jira xitaa baarar iyo goobaha khamriga lagu cabo kuwaas oo lex xad da'da ah oo kala duwan. Si loo iibsado loona cabo cabitaanada khamrigu ee goobaha khamriga, baararka iyo meelaha laga cunteeyo waxaa khasab ah inaad buuxisay 18 sano.
Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan khamriga iyo caadooyinka khamriga.
Helida dhaqdhaqaaqyada Nolosha jaaliyada